Ahoana ny fahitako ny memoiko ampiasaiko amin'ny iPad | Vaovao IPhone
Isaky ny mividy fitaovana ambony noho ilay ananantsika androany isika miaraka amin'ny tombony sy fiasa bebe kokoa, dingana iray Matetika ny fametrahana apetraka betsaka araka izay tratra, indrindra ny lalao, hiezahana hizaha toetra ny zava-bitany. Saingy rehefa mandeha ny fotoana, mazàna ireo fampiharana na lalao ireo dia mamela azy ireo ao anaty fampirimana iray ary tsy hampiasa azy io intsony isika, na dia tsy te-hamafana azy ireo aza isika raha sanatria ka te hilalao na dia manana an-tanana aza nefa tsy mila misintona azy.
Azo atao izany rehefa mandeha ny fotoana manomboka miadana miadana ny fitaovantsika. Ny tena antony, raha mbola tsy niseho ny hafatra dia satria efa ho lany ny toerana fitahirizan-tsika ny fitaovantsika hahafahana mametraka rindranasa bebe kokoa na mampandeha azy ireo.
Amin'ity tranga ity dia tsy maintsy manomboka mahita izay rindranasa tiana hamafana isika satria tsy misy toerana sahaza ny iOS hitantanana ireo rindranasa, ny fiasan'io dia afaka mamela zavatra maro irina. Misy fomba iray hahitana izay rindranasa napetrakay, ny habaka aiza no alain'izy ireo ary ny habaka fitehirizana azo ampiasaina amin'ny fitaovantsika.
Toerana fitehirizana ampiasaina amin'ny iPad-ko
Ao anatin'ny toe-javatra dia mifidy isika General ary rahampitso fampiasana.
Ny fampiasana ny fitaovana amin'ny resaka bateria sy ny fampiharana dia haseho eo ankavanana. Ao amin'ny fizarana Storage dia hiseho eo ambanin'ilay anarana ny habaka ampiasaina ankehitriny Rehefa ampiasaina ary ny toerana fitahirizana azo alaina ao amin'ny fitaovanay ambanin'ny lohateny misy.
Raha tsindrio eo Tantano ny fitehirizana, ny rindranasa rehetra napetrakay tamin'ny fitaovanay dia haseho miaraka amin'ny haben'ny habeny. Raha tsindrio ny iray amin'izy ireo, dia azontsika atao ny mamafa ny rindranasa hahazoana ny toerana fitahirizam-bokiny izay nohazoniny ho an'ny tanjona hafa.
Fitaovana 16GB no tsy mahomby foana amin'ny voalohany ny fanovana, satria ny toerana tena azo ampiasaina aorian'izay dia 12 GB ihany. Ka raha azonao atao ny mahazo fitaovana manana fahaiza-manao avo kokoa dia anoroana alohan'ny hisafidianana fitaovana misy angona finday ianao, raha tsy hoe takiana fototra izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fampianarana sy torolàlana » Ahoana ny fomba hahitako ny fahatsiarovana ampiasaiko amin'ny iPad
Apple dia manomana ny "Find My Watch" sy TVKit. Apple TV misy App Store tazana?